मनोरञ्जन Archives - Arthapage
नेपालगन्ज ३ साउन : लामो लकडाउन व्यहोरेको बाँकेका पर्यटन एवं होटल क्षेत्र अब कसरी ब्यूतिएला ? व्यवसायीहरु अन्यौलमा छन् । तर लकडाउन हट्दै जाँदा होटल एवं रेष्टुरेन्टक्षेत्र बिस्तारै चलयामान बन्न खोजिरहेका छन् । पछिल्लो समय बाँकेमा सबैभन्दा धेरै लगानी होटल एवं रेष्टुरेन्ट क्षेत्रमा भइरहेको थियो । तर त्यसलाई कोरोना कहरले सबैभन्दा धेरै प्रभावित बनाएको छ । यसरी प्रभावित भएपछि स्थानीयस्तरमा सम्भव ह
‘सीजी उन्नति कल्चरल भिलेज’ जहाँ थारु संस्कृति झल्काउने सबैथोक देख्न पाइन्छ
नेपालगन्ज। चौधरी फाउण्डेसनले नवलपुरको हर्कपुरमा ‘सीजी उन्नति कल्चरल भिलेज’ स्थापना गरेको छ । राष्ट्रको कला, संस्कृति, साहित्य, भेषभुषा, आर्टस्, क्राफ्ट, नाटक, संगितको प्रवर्द्धनका लागि सीजीले कल्चरल भिलेजको स्थापना गरेको हो। फाउण्डेसन चौधरी ग्रुप (सीजी) अन्तर्गतको सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने निकाय हो। सीजी भिलेजको चारैतिर हरियाली छ। यहाँ थारू संस्कृति झल्काउने रेस्टुराँ, अतिथिगृह र कोठाहरू छ
दर्शकको मन जितेर फर्कियो नेपालगन्जको प्याराडाइज ब्याण्ड
नेपालगन्ज : खुकुरी म्युजिक नेसन प्रतियोगिताको ग्रान्ड फिनाले आइतबार सम्पन्न भएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका बीच सुरु गरिएको उक्त प्रतियोगिता विभिन्न इलिमिनेसन राउन्ड पार गर्दै उत्कृष्ट चारमा पुगेका मध्येबाट आइतबार बेलुकी विजेता घोषणा गरियो । सर्च फर द नेक्स्ट स्टारु नाराका साथ सञ्चालन गरिएको खुकुरी म्युजिक नेसन प्रतियोगिता द नेपाल डिस्टिलरिज प्रालिले संगीतका पारखीहरूका लागि आयोजना गरे
खुकुरी म्युजिक नेसनको ग्रान्ड फिनाले आज, बाँकेका यि हुन प्रतिस्पर्धी
नेपालगन्ज : खुकुरी म्युजिक नेसन प्रतियोगिताको ग्रान्ड फिनाले आइतबार हुँदै छ । कोरोना भाइरसको महामारीका बीच सुरु गरिएको उक्त प्रतियोगिता विभिन्न इलिमिनेसन राउन्ड पार गर्दै उत्कृष्ट चारमा पुगेका मध्येबाट आइतबार बेलुकी विजेता घोषणा गरिनेछ । सर्च फर द नेक्स्ट स्टारु नाराका साथ सञ्चालन गरिएको खुकुरी म्युजिक नेसन प्रतियोगिता द नेपाल डिस्टिलरिज प्रालिले संगीतका पारखीहरूका लागि आयोजना गरेको हो
नेपालगन्जमा खुलेको दोहोरी साँझ कस्तो छ ?
नेपालगन्ज : नेपालगन्जमा लोकदोहोरी साँझ सन्चालनमा आएको छ । नेपालगन्ज वडा नं. १८ मा चौतारी दोहोरी साँझ आएको छ । प्रबन्धक डिबी क्षेत्रीका अनुसार लोकप्रिय कलाकारले दोहोरी साँझमा प्रस्तुती दिइरहेका छन् । लोक तथा गजलका पारखीको मनका सपना पूरा गर्ने उदेश्य सहित दोहोरी साँझ सन्चालनमा ल्याइएको हो । ट्राभल भिलेजको नजिक सन्चालित उक्त दोहोरी साँझमा इन्टिरियर डिजाइन निकै आर्कषक रहेको छ ।
आइएमई ग्रुपको अगुवाइमा साढे २ अर्ब लगानीमा लुम्बिनीमा बन्ने केवलकार यस्तो हुने छ
नेपालगन्ज । व्यवसायिक घरना आइएमई ग्रुपको अगुवाइमा बुटवलदेखि पाल्पासम्म ३ किलोमिटर लामो लुम्बिनी केवलकार सञ्चालनमा आउने भएको छ । लुम्बिनी केवलकार प्रालिले निर्माण गर्न लागेको आयोेजनाको कुल लागत साढे ३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । काम सुरु भएको २ वर्षमा सो केवलकारकार सञ्चालनमा आउने कम्पनीले जनाएको छ । लुम्बिनी केलवकारको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार बिहान बुटवलमा शिलान्यास गर्दैछन ।
नेपालगन्जलाई चिनाउँदै द् प्याराडाईज ब्याण्ड,खुकुरी म्युजिक नेशनको उत्कृष्ठ ८ मा पर्न सफल
नेपालगन्ज ८ माघ : नेपालगन्जको द प्याराडाईज ब्याण्ड खुकुरी म्युजिक नेशनको टप आठमा पर्न सफल भएको छ । खुकुरी रमले देश एवं विदेशबाट नयाँ प्रतिभाको खोजि गर्ने क्रममा जनवरी १ तारिखकबाट उक्त अभियान शुरु गरेको थियो । सोही म्युजिक अभियान अन्र्तगत अनिश श्रेष्ठ, क्रिस्टोफर पुन, विवेक तामागं, सविन थापा र रोशन बिश्वकर्मा सदस्य रहेको प्याराडाइज ब्याण्ड टप ८ मा पर्न सफल भएको हो । https://youtu.be/Hcs0
रमेश खनालको पहिलो म्यूजिक भिडीयो भोलि सार्वजनिक हुँदै
नेपालगन्ज २८ भदौ : कोहलपुरका टिकटक स्टार रमेश खनालको पहिलो म्यूजिक भिडियो भोलि सार्वजनिक हुँदै छ । दामोदर भण्डारी र तुल्सी घर्तीमगरको गायनमा बनेको छुर्पी चौर गाईको बोलको गीत युट्युवमा सार्वजनिक हुन लागेको हो । खनालको यो पहिलो म्यूजिक भिडियो हो भने उनका फ्यानले प्रतिक्षा गरेर बसेका छन् । टिकटक मार्फत चर्चित बनेका खनाल कोहलपुरका युवा व्यवसायी हुन । https://arthapage.com/2020/09/25
टिकटकबाट सेलिब्रेटी बनेका कोहलपुरका युवा व्यवसायी रमेश खनाल म्यूजिक भिडियोमा
नेपालगन्ज १६ भदौ : कोहलपुर न्यूरोडका युवा व्यवसायी रमेश खनाललाई यतिबेला फोन उठाउँन भ्याई नभ्याई छ । टिकटकमा नृत्य हेरेर वाहीवाही गर्नेको फोन आइरहन्छन् । पसलमा आउने सेवाग्राहीले तपाई त राम्रोसंग नाच्नुहुँदोरहेछ नभन्ने कोही हुँदैन । साथीभाईको त कुरै छाडौ । टिकटबाट सेलिब्रेटी बनेका खनाल यतिबेला काठमाण्डौंमा छन्, म्यूजिक भिडियाको छायाँकनका लागि । अब उनको आर्कषक नृत्य म्युजिक भिडियोमा पनि देख्न
ऋषि थापाले अत्यन्त लोकप्रिय गीत म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । पछिल्लो समय तीजको महोल भएतापनि अन्य गीत संगीतहरु बजारमा आइरहेका छन् । केही राम्रा गीतहरुलाई दर्शक स्रोताले राम्रै रुचाएका पनि छन् । यसैबीच एउटा फरक खालको गीत सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक “नरोउ है सानु” बोलको गीतमा ऋषि थापाको मर्मस्पर्शी शब्द, संगीतसंगै सुमधुर स्वर रहेको छ। गीतका प्रत्येक शब्दहरूले सुन्ने जोकोहीको मन छुने गर्छन